သူယောင်မယ်များနှင့်ပျော်ပါးခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သူယောင်မယ်များနှင့်ပျော်ပါးခြင်း
- king zawgyi
Posted by king zawgyi on Jun 20, 2012 in News, World News | 26 comments
ဇော်ဂျီတွေဟာ ဇော်ဂျီဖြစ်စေဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆေးမြစ်တွေတူး ၊ ဆေးတွေစပ် ၊ ဆေးတွေဖော်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ ဖိုဝင်ကြတယ်။ ဖိုဝင်လို့ အောင်သွားရင် ဇော်ဂျီ ဖြစ်တော့တာပဲ။
ဇော်ဂျီဖြစ်တာနဲ့ ထိုတောထဲမှာ ရှိနေတဲ့ “ သူယောင်သီး ” ကို သူ့ရဲ့ တောင်ဝှေးနဲ့ ထိုးလိုက်ရင် ဒီအသီးဟာ ကြွေကျလာပြီး တကယ့်လူလို အသက်ဝင်လာတယ်။ ဒီအခါမှာ ဇော်ဂျီတွေဟာ ဒီသူယောင်မယ် လူအတုနဲ့ ပျော်ပါးနေထိုင်တယ်။ နောက်တော့ သူက အလိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင် သူ့တောင်ဝှေးနဲ့ ပြန်ထိုးပြီး အသက်နုတ်လိုက်လေ့ရှိတယ်။
ဒီအသီးတွေဟာ အသက်မရှိပဲ မြေပေါ်ကို ပြူတ်ကျပြီး ပုပ်ရင် လူသေတစ်ယောက်လိုပဲ အနံ့ထွက်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က အဖွားပြောပြောနေတဲ့ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်လေးပါပဲ။ ဒီ သူယောင်မယ် အသီး ရှိလား မရှိဘူးလားဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ မမြင်ဖူးတော့ မသိဘူး။ ရှိချင်မှလည်း ရှိမယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။
အခုတော့ ရှိတယ် ဆိုတာကို ရှာတွေခဲ့ပါပြီ။ အခု အောက်မှ တွေ့နေရတာကတော့ “ ထိုင်း ” နိုင်ငံထဲမှာ ပေါက်ရောက်နေတဲ့ သူယောင်မယ် အပင်မှ သူယောင်မယ် အသီးတွေပါပဲ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပများကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စွာ မြင်ရပါတယ်။
ထိုင်းဘာသာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီအံ့သြဖွယ်ရာ အပင်ကို Nareepol လို့ခေါ်ပါတယ် ။ Naree ဆိုတာက မိန်းက လေးကိုရည်ညွှန်းပြီး pol ဆိုတာကတော့ သစ်ပင် ၊ အပင်တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ် ။ မလေးလိုဆိုရင်တော့ Buah လို့ခေါ်တွင်ပါတယ် ။ရှမ်းပြည်အာသံပြည်တို့ တွင်လဲ ရှိပါတယ်။
ရွာသား လူပျိုကြီးတွေအတွက် အသစ်စက်စက်ပိုစ့်လေးနဲ့ စလိုက်တာပါဗျာ.
About king zawgyi
king zawgyi has written3post in this Website..
ရှမ်းလူမျိုး မဟုတ်သော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူ... ရှမ်းမ မှလွဲပြီး မည်သည့်ဆော် ချောချောမှ ရင်ခုန်ခံစား မရသူ... ရှမ်းမချောချောလေးများ မြင်သောအခါ ထူးထူးကဲကဲ ထူးဆန်းစွာ ရင်အရမ်းခုန်မိသောသူ... ရှမ်းမချောချောလေး၏ ရက်စက်ခြင်းကို အပြင်းအထန် ခံစားဘူးသော်လည်း နားကျည်း မရသူ တစ်ယောက်ပါ။
View all posts by king zawgyi →
ဖရဲသီးတို. လမ်းထိပ် ၈၄ မှာ ဆို သူယောင်မယ် တွေ ဆိုင်ကယ်စီးနေတာ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို မြင်ရတယ်………..ဟုတ်တယ်မလား ဖရဲမ……….ဟိဟိဟိ
နောက်တခါ မခေါ်ဘဲ မညှိနဲ့တဲ့
ဟဲ့ ဖြဲသီး … အဲ့ဒါ ဘာလဲ အခုမှ မသိတော့ဘူးလား …. ။
ရူရူးပေါက်တတ်တဲ့ ကြက်ဟဲ့ ……… ဟွန့် 
သိသူသူငယ်ချင်းများ မည်သို့တင်ရမည်ကို ပြောပြပေးပါဗျာ….
credit to : http://mindhammagroup.multiply.com/photos/album/15/15#
သူယောင်မယ်သီးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လင့်ခ့်လေးတွေ..
တာဝန်ကျေပါပေ့ ဗျာ .. လေးစားပါတယ် အူးဗိုက်ရေ … ကျွန်တော့မလဲ .. ခုတလော ကွန်နက်ရှင် ချုချာတာနဲ့ လိုက် မတူးဆွ နိုင်ဘူး ရယ် ..။
အဲဒီ ဖရဲတို့ ပြောတဲ့ သူယောင်မယ်တော့ကြောက်တယ်ဗျ ။
အဘပေ မြင်ဖူးတာလေးကို ပြန်ရှဲရရင်တော့
လူအတိုင်းပါဘဲ အဖုအထစ်အဖောင်း အားလုံးနဲ့ ပြည့်စုံသကွဲ့ 
သူရို့ လေးတွေဟာ ၊ ညနေစောင်းမှာ အသက်ဝင်လာပြီး ကိုယ်ထင်ပြကြတော့တာဘဲ
ကိုယ့်အနားခေါ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဂါထာတိုတိုရွတ်ပြီး မန်းမှုတ်ရတယ်တဲ့
အဲဒီ ဂါထာ ကို သိချင်သပ ဆိုရင်… မန်းဂေဇက် က
“ ဝါးတားမယ်လွန် ” ဆိုတဲ့ ပြင်ညာရှိလေး ကို မေးမြန်းနိုင်တဲ့အကြောင်း ကွန်မင့်ခဲ့တယ်နော ။ အဟွတ်
အင်းအဘပေ အဘပေ ကိုယ့်အသက်ကလေးလဲကြည့်ပါအုံးကွယ်။ စိတ်လျော့ စိတ်လျော့။
ဘပေ အတွက် လုံးဝ စိတ်မဘူပါနဲ့ ကွယ်
ဘပေ က မြင်ခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြတာဘာ
အေးးတော့… ပုံထဲမှာ တကယ့်မိန်းမပျိုလေးတွေ အတိုင်းဘဲ…
ဟဲ့.. အဲဒါ အင်ကြီးဆို…
ဟာ…မဖြစ်နိုင်တာ။ ဘယ်လဲဟ…သူယောင်မယ်။ ဖရဲသီးပြောတဲ့ သူယောင်မယ်တွေကတော့ ရန်ကုန်မှာလဲ အများကြီးပဲ။ သစ်ပင်မှာမနေ၊ ဟိုတယ်မှာနေ၏။
လမ်းပေါ်မှာလဲရှိ၏။ ည ဆိုတလက်လက်နဲ့။ CD ပြားလေးတွေထောင်ထောင်ပြတာပြောပါတယ်။
တစ်မျိုးပါလား .. တီတီ သဲနုအေး ရဲ့ … သိတာတော့ ဟေ့ .. ရွှတ်ရွှတ်… ဆိုပြီး လှမ်းခေါ်သလားလို့ … ဆရာစံ လမ်း ထောင့်မှာလေ ..။
မသဲနုအေးရေ. စီဒီပြားလေးတွေကို ရောင်ပြန်လုပ်ပြီာ
ဖောက်သည်ခေါ်နေကြတာပေါ့။အင်းဗျ. ကိုဖရဲတို့ အူးပေ
တို့ ဆီ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ တောင် ခေတ်မှီနေပါပေါ့လားးးးးးး
အဲ့ဒီပုံတွေ …အင်တာနက်ထဲပြန့် နေခဲ့ပေမယ့် …. အင်တွေကြီးပဲ ဆို …
တကယ့် သစ်ပင်က အသီးမဟုတ်ပါဘူး တဲ့ ……….. ။
ဆြာဂီရေ ခင်ဗျားတို့တာလောက်တော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်တဲ့….
ဘာပင်မှာဘာတွေသီးပြီးဘာအပင် မှာဘာ အပွင့်တွေပွင့်နေတာလည်း။။။
nareepol က thai မှာပဲ ပေါက်တာလား။